“Jooji is Gaad-gaadka aad Gacalisadeyda ku heyso…”.- Marouane Fellaini oo loo digay !! – Gool FM
“Jooji is Gaad-gaadka aad Gacalisadeyda ku heyso…”.- Marouane Fellaini oo loo digay !!
(Manchester) 22 Sab 2018. Tababare Jose Mourinho ayaa ammaanay Marouane Fellaini kaddib markii uu ku lug lahaa labadii gool ay kaga adkaadeen Watford ciyaartii sabtidii hore ee ku idlaatay 2-1.
Balse, wuxuu cannaan iyo facshar kala kulmay Matthew Mawhinney, kaddib markii uu Fariimo rabitaan u soo diray Gacalisadiisa Tina Stinnes.
Tina waa xiddig 23-jir ah oo qeyb ka ahaan jirtay barnaamijka Taleefishinka eea Love Island, timo waynaha reer Belgium ayaana damcay inuu xiriir la sameeyo balse waxaa ku qabtay oo fariimihiisa arkay saaxiibkeed Mawhinney.
Fellaini ayaa Instagramka Tina ugu diray fariin ah: “Hey, sidee tahay? ”.
Matthew Mawhinney ayaana go’aansaday inuu isaga ka jawaabo fariinta loo soo diray Gacalisadiisa Tina waliba si facshar ah oo uu qofkasta arkayo.
Wuxuu Profil -kiisa ku soo dajiyay Screenshot’ uu ka qaaday wada sheekeysigii uu Fellaini isku dayay inuu kula xiriiro saaxiibtiisa wuxuuna soo raaciyay qoraal ah:
“Fellaini jooji Fariimaha tooska ee Saaxiibadeyda.”
Fellaini oo ay horey u soo haasaaween gabdho badan oo ay qaarkood jilaan filimaanta xun xun ayaa sidoo kale la sheegayaa in 2015 kii uu gabadha reer France ee dharka xayaysiisa ee Eglantine-Flore Aguilar uu u diray Sawir isagoon dhar wadan.